၅ည၆ရက် အပျော်စီး Costa Victoria သင်္ဘောကြီး နှင့် အတူ စင်ကာပူ - ဖူးခက် - လန်ကာဝီခရီးစဉ် - Swan Saung Yee Travel & Tour
Swan Saung Yee Travel & Tour » ၅ည၆ရက် အပျော်စီး Costa Victoria သင်္ဘောကြီး နှင့် အတူ စင်ကာပူ - ဖူးခက် - လန်ကာဝီခရီးစဉ်
Home / Beach Tour Package / ၅ည၆ရက် အပျော်စီး Costa Victoria သင်္ဘောကြီး နှင့် အတူ စင်ကာပူ – ဖူးခက် – လန်ကာဝီခရီးစဉ်
၅ည၆ရက် အပျော်စီး Costa Victoria သင်္ဘောကြီး နှင့် အတူ စင်ကာပူ – ဖူးခက် – လန်ကာဝီခရီးစဉ်
Category: Beach Tour Package
17 DEC 2014) ရန်ကုန် – စင်္ကာပူ ETD: 1140 – ETA: 1620hrs (ညစာ)
ယနေ့ မနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ တဆင့် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၏ ဦးဆောင်မှူဖြင့် Jetstarလေကြောင်းလိုင်းကိုစီးနင်းလိုက်ပါကာစင်ကာပူ နိုင်ငံချန်ဂီလေဆိပ်သို့စတင်ခရီးဆက်ကြပါမည်။ ချန်ဂီလေဆိပ်မှ တဆင့် ကားဖြင့် Costa Victoria(အီတလီတွင်အကြီးဆုံး၊ ဥရောပနံပါတ် ၁ အီတလီစတိုင် ဇိမ်ခံသင်္ဘောကြီး)သင်္ဘောကြီးစောင့်ကြို နေရာသင်္ဘော ဆိပ် – Marina Bay Cruise Center (MBCC) သို့ ထပ်မံခရီးဆက်ကြပါမည်။ထို့ နောက် တွင် တော့ သင်္ဘောကြီးပေါ်ရောက်ရှိအနားယူကာ
ညစာသုံးဆောင်ကြပြီးနောက် ထိုသင်္ဘောကြီးပေါ်ရှိ Welcome ရှိုးပွဲများနှင့် သင်္ဘောကြီး၏ ခေတ်မှီအပြင်အဆင်များကိုလိုက်လံ ကြည့်ရှူလေ့လာကြပြီးနောက် အိပ်စက်အနားယူကြပါမည်။ ည ၁၀ နာရီ မှ စတင်၍ Costa Victoria သင်္ဘောကြီးမှာစင်ကာပူဆိပ်ကမ်းမှ ခွာပြီးထိုင်းနိုင်ငံဖူးခက်ကမ်းခြေသို့ ဦးတည် ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပါသည်။
18 DEC 2014) ပင်လယ်ပြင် ခရီးစဉ် (မနက်၊ နေ့ လည်၊ ညစာ)
ယနေ့တွင်တော့ တစ်နေ့ တာလုံးပင်လယ်ပြင်ပေါ်တွင် ခုတ်မောင်းနေသောCosta Victoria သင်္ဘောကြီးပေါ်တွင်သာ
အချိန်ယူအပန်းဖြေရင်းအနားယူကြပါမည်။ ယနေ့ ခေတ်များတွင်အပျော်စီးဇိမ်ခံသင်္ဘောများသည် ရေပေါ်အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသည့်အပြင် သက်တောင့်သက်သာရှိ ပြီးအဆင်ပြေကောင်းမွန်သောအပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း
လက်ခံထားကြပါသည်။ယနေ့ တစ်နေ့ တာလုံးအနေဖြင့်အေးအေးဆေးဆေး နှင့် စိတ်ကိုအပြည့်အ၀ လန်းဆန်းစေနိုင်ကြဖို့ ဘင်္ဘောကြီးပေါ်တွင် မရပ်မနားတင်ဆက် ပြသနေသောပျော်ရွှင်စရာရှိးပွဲများကိုလည်းတစ် ခုပြီးတစ် ခုစိတ်ကြိုက်ခံစားကြပါမည်။ ကမ္ဘာအဆင့်မှီ
အစားအစာများကိုလည်းစားသုံးနိုင်ကြပြီးခေတ်မှီ Casnino ကစားဝိုင်းကြီးများတွင်လည်းသင်၏ကံကိုစမ်းသပ်ရင်းအပန်းဖြေနိုင်ကြပါသည်။ စည်းချက်သံများနှင့်အညီ Disco Club တွင်ကခုန်ခြင်းဖြင့်လည်းတစ်ညတာကိုအပန်းဖြေနိုင်ကြပါသည်။ ထို့သို့ သောအားသာချက်များကြောင့်
ခရီးသွားများအနေဖြင့် တစ်ခြားသောခရီးစဉ်များထက် သင်္ဘောခရီးစဉ်များကိုပိုမိုရွေးချယ်လာကြပါသည်။ တစ်ခါ ပင်လယ်ပြင်ခရီးထွက်ပြီးသည် နှင့် နောက်တစ်ခါ ပြန်ရောက်လည်ပတ်ချင်မိမှာအသေအချာပင် ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ တစ်နေ့ တာလုံးအနားယူအပန်းဖြေကြရင်းမနက်ဖြန်ခါ ဖူးခက်ခရီးစဉ်နှင့် သန်ဘက်ခါ လန်ကာဝီခရီးစဉ်များကိုလည်ပတ်နိုင်ဖို့ အတွက် အားမွေးထားကြရပါမည်။
19 DEC 2014) ဖုးခက်(Phuket) (မနက်စာ၊ ညစာ)
ယနေ့မနက် ၉နာရီတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးကျွန်းတစ်ကျွန်းအဖြစ်လည်းအပန်းဖြေစရာလှပသောကမ်းခြေတစ်ခုအဖြစ် နာမည်ကျော်ကြားလှသောဖူးခက် (Phuket) ကျွန်းဆိပ်ကမ်းသို့သို့ရောက်ရှိပါမည်။ဆိပ်ကမ်းမှတစ်ဆင့် ဖူးခက်ကျွန်း၏ နာမည်ကျော် ကြားသောအပန်းဖြေကမ်းခြေနှင့် တကွ ကြီးမားသောထိုင်တော်မူဘုရားကြီး Giant Buddha အစရှိသောနေရာများသို့ ကိုယ့်အစီအစဉ်နှင့် ကိုယ် ဖြစ်စေသင်္ဘောကြီးမှ စီစဉ်သောအဖွဲ့ လိုက်ခရီးစဉ်များကိုဝယ်ယူအားပေး၍ဖြစ်စေသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ကြပါသည်။ ညနေပိုင်းသတ်မှတ်ထားသောအချိန် (၅ – ၆ နာရီဝန်းကျင်ခန့် )တွင် သင်္ဘောကြီးပေါ်သို့ပြန်လည်တက်ရောက်ကြပြီးနောက် ညစာသုံးဆောင်ကြပြီးအပန်းဖြေအစီအစဉ်များကိုခံစားအနားယူကြပါမည်။
20 DEC 2014) လန်ကာဝီ (Langkawi),မလေးရှား (မနက်၊ နေ့ လည်၊ ညစာ)
ယနေ့ မနက် ၇ နာရီခန့် တွင်မလေးရှားနိုင်ငံ ၏ နာမည်ကျော် သာယာလှပသောကမ်းခြေတည်ရှိရာလန်ကာဝီ မြို့ သို့ရောက်ရှိပါမည်။ သဘောင်္ကိုကျောက်ချထားမည်ဖြစ်ပြီးလှေများ ဖြင့် ကျွန်းပေါ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ လန်ကာဝီကျွန်းမြို့ ကလေးသည် ကျွန်းပေါင်း ၉၉ ခုဖြင့် စုစည်းထားသော ကျွန်းစုတစ်ခုဖြစ်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံ၏ အနောက်မြောက် ဘက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသောကမ်းခြေမြို့လေးတစ်မြို့ ဖြစ်ပါသည်။လန်ကာဝီမြို့ ပေါ်ရှိအထင်ကရ Eagle Square၊ လှပသာယာသောလန်ကာဝီကမ်းခြေအပြင် မဖြစ်မနေသွားရောက်လည်ပတ်သင့်သော (Eagle Feeding – သာယာသောဒီရေတောများအတွင်းလှေငယ်များဖြင့် သွားရောက်ပြီးသိမ်းငှက်အစာကျွေးခြင်း) အစရှိသောခရီးသွားများကိုဆွဲဆောင်ရာနေရာများသို့ကိုယ့်အစီအစဉ်နှင့် ကိုယ် ဖြစ်စေသင်္ဘောကြီးမှ စီစဉ်သောအဖွဲ့ လိုက် ခရီးစဉ်များကိုဝယ်ယူအားပေး ၍ဖြစ်စေသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ကြပါသည်။ မွန်းလွဲပိုင်းသတ်မှတ်ထားသောအချိန် (၁၂ နာရီဝန်းကျင်ခန့် ) တွင် သင်္ဘောကြီးပေါ်သို့ပြန်လည်တက်ရောက်ကြပြီးနောက် ကမ္ဘာအဆင့်မှီအစားအသောက်များကိုသုံးဆောင်ကြပြီးအပန်းဖြေအစီအစဉ်များ
ကိုခံစားအနားယူကြပါမည်။ နေ့လည် (၁း၀၀)တွင် Costa Victoria သင်္ဘောကြီးမှာလန်ကာဝီမှ ထွက်ခွာပြီးစင်္ကာပူသို့ ပြန်လည် ဦးတည် မောင်းနှင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
21 DEC 2014) ပင်လယ်ပြင်ခရီးစဉ် (မနက်၊ နေ့ လည်စာ)
ယနေ့သည် သင်၏ နောက်ဆုံးပင်လယ်ပြင် ခရီးစဉ် ကိုခံစားရမည့် နေ့ဖြစ်သည်။ နေ့လည် ၂ နာရီခန့် တွင် စင်္ကာပူသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီးကားဖြင့် မှဟိုတယ်သို့ သွားရောက် Check In ၀င် အနားယူကြပါမည်။ ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင်တော့ Free and Easy Program ဖြစ်ပြီးစင်ကာပူ၏ Christmas နှင့် New Year အကြို ဈေးရောင်းပွဲတော်များကျင်းပနေရာ Shopping Center ကြီးများသို့ နှင့် အထင်ကရနေရာMerlion Square အစရှိသောနေရာများသို့ စိတ်ကြိုက် ကိုယ့်အစီအစဉ်နှင့် ကိုယ်သွားရောက်လည်ပတ် ဈေးဝယ်ထွက်နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ နောက် တွင် တော့4Stars ဟိုတယ်တွင် တစ်ညတာအိပ်စက်အနားယူကြပါမည်။
22 DEC 2014) စင်္ကာပူ – ရန်ကုန် ETD: 0910 – ETA: 1040 hrs (မနက်စာ)
ပာိုတယ်တွင် မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် တွင်ချန်ဂီလေဆိပ်သို့ကားဖြင့်ပို့ဆောက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ နောက်တွင်တော့ လေဆိပ်မှ တစ်ဆင့် ရန်ကုန်သို့ Jetstarလေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ပြန်လည် ထွက်ခွာလာကြပါမည်။
Day 1: ည(၀၆း၀၀) Check-In ၀င်ပါမည်။ ည(၁၀း၀၀) တွင်ထွက်ခွာပါမည်။
Day 2: ပင်လယ်ပြင်ခရီးစဉ်
Day 3: မနက်(၀၉း၀၀) ဖူးခက်သို့ရောက်ပါမည်။ ည(၀၇း၀၀)တွင်ထွက်ခွာပါမည်။
Day 4: မနက်(၀၇း၀၀) လန်ကာဝီသို့ရောက်ပါမည်။ နေ့လည်(၀၁း၀၀)တွင်ထွက်ခွာပါမည်။
Day 5: နေ့လည်(၀၂း၀၀)တွင်စင်္ကာပူသို့ပြန်လည်ရောက်ပါမည်။
Landmark Village Hotel/Albert Court Hotel တွင် တစ်ညနေထိုင်ခွင့်
အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ် (JetStar, Luggage – 20 kg)
မနက်၊ နေ့ လည်၊ ညစာများ (ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း)
Inside Classic အခန်းဖြင့် သဘောင်္ပေါ်တွင် ၃ည ၄ ရက် နေထိုင်ခွင့်
သဘောင်္ဆိပ်အခွန်အခများ နှင့် ခရီးသွားအာမခံကြေး (သင်္ဘောခရီးစဉ်အတွက်သာ)
ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာကြေးများ (ထိုင်း ၊ စင်ကာပူ)
သဘောင်္ပေါ်တွင်ကောက်ခံသောအဖိုးအခ (လူကြီးတစ်ဦးလျှင် USD 46 (၁၃နှစ်နှင့် အထက်) |ကလေးတစ်ဦးလျှင် USD 23 ( ၄ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အတွင်း) | ၄ နှစ်အောက် ကလေးအခမဲ့)
ဖူးခက်ကျွန်းတွင် တစ်နေ့ တာလည်ပတ်စရိတ်နှင့် နေ့ လည်စာ
လန်ကာဝီကျွန်းတွင် နေ့ တဝက်စာလည်ပတ်စရိတ်
စင်ကာပူတွင် နေ့ တစ်ဝက်စာလည်ပတ်စရိတ် နှင့် ညစာ
Pregnancy policy : more than 24 weeks deny boarding
Child policy : Child cruise free below 13 years old
Infant : minimum6months and below2years old base on Sailing date
Hotels (rates in USD per person) Rooming Single supplement 2A to go 3A to go 2A1C 2A2C
Landmark Village Hotel Singapore 4*Albert Court Hotel, Bugis Singapore 4*OR Similar Superior 1472 1050 1136 1049 960
Deposit upon booking: 50% of cruise fare (round up to the nearest dollar)
Balance payment: 60 days before sailing date
An amendment fee of USD100 per person per transaction applies for changes made to cruise bookings
*Rates in the tariff are based on current prices (USD) at time of production and are subject to changes in the event ofacurrency fluctuation*
Itinerary may subject to change without prior notice and will fixed upon tour confirmation.
Costa Victoria Fact Sheet
75,000 Tons/Service in 1996/Upgrade in 2013
Passenger Capacity: 2,394/14 Decks
964 cabins including 242 private balcony, 20 suites
3 Swimming Pools,4Jacuzzis, Outdoor Jogging Track, open air pool deck
Theatre on2decks, Casino, Disco, Internet Point, Wi-Fi Service, Library, Shopping Centre, Squok Club
Wellness centre with GYM, treatment rooms, sauna & Turkish bath, multipurpose sports pitch
Restaurants Time Deck No. Service/Sitting Style
Bolero Buffet 7.00am-10.00am 11 (Rigoletto) Open Sitting / Buffet
Sinfonia Restaurant 7.30am-9.15am5(Boheme) Open Sitting / Buffet
Bolero Buffet 10.00am-11.00am 11 (Rigoletto) Continental breakfast
In your cabin 7.00am-10.00am (No table/sitting reservation necessary)
Bolero Buffet Noon-3.00pm 11 (Rigoletto) Buffet
Sinfonia Restaurant 12.45pm-2.15pm5(Boheme) Open Sitting
Bolero Buffet 4.30pm-5.30pm 11 (Rigoletto) Afternoon tea & snacks
Pizzeria 4.00pm-7.00pm 12 (Butterfly) Pizza by the slice
9.30pm-11.00pm Pizza from the menu
Sinfonia& Fantasia Restaurants 1st sitting-6.15pm5(Boheme) Fine Dining (No charge exclude beverages)
Bolero Restaurant 1st sitting-6.15pm 11 (Rigoletto) Buffet
*“LL Magnifico” Club restaurant 7.00pm-9.00pm 12 (Bufferfly) Fine Dining
Lounges 11.30pm Deck6&7Snacks
*Magnifico Club Restaurant – Chargeable / A la carte menu : USD33.50 per pax (service charge included)
Name Time Deck No.
Planetarium Bar 6.45am-1.00am5(Boheme)
Grand Bar Orpheus 6.45am-2.30am6(Traviata)
Bar Festival 7.00pm-11.30pm
Disco Rock Star 11.30pm-…
Wine Bar (Bar Capriccio) 5.30pm-2.30am7(Carmen)
Concorde Plaza 7.00pm-1.30am
Cigar Bar 7.30pm-2.00am
Bar Bellavista 8.00pm-9.30pm
Bar terrazzo Caffe 6.45am-10.00pm 11 (Rigoletto)
Bar Sirena 7.00am-9.30pm
Ice cream Bar Sirena 10.00am-noon/2.00pm-6.00pm
La Tavernetta Noon-2.30am 12 (Butterfly)
Italia Umbria Cervarodella Sala Castellodella Sala-Antinori USD72
Alto Adige Leda Biancod.o.c – Aneri USD35
France Bougogne Chablis Premier Cru ac – Montmains USD55
Italia Toscana Solaia t.g.t – Antinori USD178
Italia Trentino Ferrari PerleMetodoClassiso USD34
*All subject to changes please reconfirm on board
Meeting Rooms/Restaurants Configuration
Deck Venue Name Max Capacity Remark
Deck5— Boheme Sinfonia Dining Room (aft) 650 Seats Not available for private function
Deck5— Boheme Fantasia Dining Room (mid ship) 540 Seats Not available for private function
Deck5— Boheme Main Entrance Hall 40 Seats Open Area
Deck5— Boheme Planetarium Bar 43 Seats Open Area
Deck6— Traviata Festival TheaterDeck6374 = Chair + 23 Bar Stools +6Wheelchairs(Deck6+7= 625 Seats + 34 Standing Room) Always not available after 5pm
Deck6— Traviata Festival Showroom Bar No sitting (2,700 sqf) Always not available after 5pm
Deck6— Traviata Arcadia Boulevard – Photo & Video Gallery 20 Seats
Deck6— Traviata Squok Club Children Room9Seats
Deck6— Traviata Rock Star Disco 94 Seats
Deck6— Traviata Orpheus Grand Bar 213 Seats
Deck6— Traviata Winter Garden 213 Seats
Deck7— Carmen Festival TheaterDeck7251 = Chairs + 11 Bar Stools(Deck6+7= 625 Seats + 34 Standing Room) Always not available after 5pm
Deck7— Carmen Concorde Plaza – Deck7172 Seats
Deck7— Carmen Conference Center A 55 Seats (430 sqf)
Deck7— Carmen Meeting Room B 25 Seats
Deck7— Carmen Meeting Room C & Library4Seats
Deck7— Carmen Chapel 35 Seats
Deck7— Carmen Portobello Marketplace 20 Seats
Deck7— Carmen Capriccio Lounge 118 Seats
Deck7— Carmen Bellavista Bar 98 Seats
Deck7— Carmen Jolly Card Room 35 Seats
Deck 8 — Otello Concorde Plaza – Deck 8 129 Seats
Deck9— Tosca Concorde Plaza – Deck9106 Seats
Deck 10 — Norma Concorde Plaza – 12 Seats
Deck 11 — Rigoletto Boleo Buffet Restaurant 404 Seats Not available for private function
Deck 11 — Rigoletto La Terrazza Cafe 296 Seats Open Air Area – Extention to BoleoBuffert Restaurant
Deck 11 — Rigoletto Sirena Bar (Pools..) 248 Seats + 320 Sun Chairs
Deck 12 — Butterfly La Tavernetta Pizzeria 153 Seats
Deck 12 — Butterfly Club Restaurant Magnifico 87 Seats
Deck 12 — Butterfly Teen’s Room 20 Seats + 1 sofa
Deck 14 — Solarium Wimbledon Tennis Court
Deck 14 — Solarium Solarium Sun Deck 332 Sun Chairs
The Costa Victoria has full wireless Internet coverage in the public areas of the ship or comfortably from cabins.
Charges: Account Opening Fee (one time throughout the trip): USD3
1 hour: USD10/3hours: USD24/ Pay per use: USD0.50 per minute
Mahjong rental – Per hour USD3
Squok Club (ages 3-11) & Teen Zone (ages 12-17)
Arts & Crafts e.g. T-shirt painting, pool games, karaoke & dancing
Big games & day time activities e.g. Treasure hunt, sports tournaments, disco games
Yangon ~ Chaung Tha ~ Yangon (2Nights/3Days Trip )
Yangon ~ Ngwe Saung ~ Yangon (2 Nights/3Days Trip)
Yangon ~ Ngapali ~ Yangon (2Nights/3Days Trip )
Honey Moon Package Tour ( Chaung tha Beach )2Nights/ 3Days